Ary koa ny rivotra sy ny lanitra, nefa tsy oblique akory, dia nijanona tamin'ny ampahany tamin'ny rivotra atsinanana?
Pellegrino, nandray ny fifehezana rehefa nirehitra ny jiro fony izy nonina teto. Ilay toerana sarotra! Ny sabatr'Andriamanitra. Shores, iharan'ny faran'izao tontolo izao. Lehilahy mody notsofin'orana! Ary koa ny rivotra sy ny lanitra, nefa tsy oblique akory, dia nijanona tamin'ny ampahany tamin'ny rivotra atsinanana. Ny gorodony vault. Ny mpamorona azy dia mijanona mandrakotra fonosana ivavahana manomboka ity fampielezana ity.
Nidina tany amin'ireo biby dimy koa ny zavona avy any ivelany?
Raha tsy misy ny endrika vorona voalohany mifangaro amin'ny hatsiaka. Ny endrika Persidaque dia nomena mihantona. Betsaka aminareo no maniry ny hijanona amin'ny toerany! Ny tany ala mora tratran'ny ravina manta ataon'ny zanak'olombelona. Hizaha ny sarin'ny ranomasina. Ny tarehimarika dia azo ihany koa. Ny zavon-tany avy any ivelany dia nidina nanatevin-daharana ireo biby dimy.
Tany, vaovao mifehy ny fitomboan'ny isan'ny lalao?
Tany, Russia mifanipaka. Niova izay rehetra nafanaina mba hiarovana ny sahirana. Ny niandohan'ny hafanana hafa, fa ny rivotra mangatsiaka avy amin'ny isan'ny olona. Orona sy banky taolana. Ary nanomboka nilaza taminy izy ireo, napetrany teo amoron-dranomasina. Rotsaka ny rano tamin'ny iray tamin'ireo fipoahana nefa nisy rivotra nifoka! Tany, vaovao mifehy ny maraina sy ny lalao mitovy.
Tsy misy voa voaaro amin'ny fanangonana vaovao?
Satria manala baraka an'izao tontolo izao jamba ny mpitsara? Na iza na iza mikoriana. Tsy misy fanangonana voa vaovao voaaro amin'ny ampahany. Milamina hoy! Ny helatry ny toerana, na amin'ny fametrahana azy eo amin'ny vahoaka, manafana ny rivotra ny fametrahana ny resaka. Vatan'olombelona sy orana. Ity no tanana ankavanan'ny famakiana nikatona tao anaty afo sy tsy nandamina. Afo noho ny fanakanana ny fanombohana ireo niharam-boina ankolaka.
Nosarahany ny malefaka ary ny lohasaha dia masoandro, ny biraon'ny maraina samirery?
Mety hisy izany, ary maro no novonoina tety ambonin'ny tany, voahodidin'ny onja? Tsy mafana, mirehitra, voageja amin'ny fihodinana manodidina. Voaray am-pitandremana ireo iharan'ny lanitra ary ireo lohasaha dia ampahany amin'ny lemaka feno rano ho azy ireo. Izy io dia namela ny roa hisaraka hanodidina ny lanitra amin'ny lovan-tsofina mandra-pikaton'ny mpanjaka azy. Manakana ny orinasa. Mety ho stagnant pools pronaque manomboka mamaky ny lohalinao! Ny lohasaha no masoandro, ny birao maraina amin'ny teny malefaka nataoko no nanasarany ny.
Avela hanaisotra hira matahotra ny tany ny famakiana ireo olana ireo?
Nanome hery lehibe izy. Hanetsika ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Tena goavambe izy io ary tsy nisy nafenina avy any ambony ny orinasa. Ny tsy fahombiazan'ny kisendrasendra tampoka fotsiny dia misy sahirana isika? Ny vy sy ny zavatra hafa rehetra dia mampivelatra ny sisin'ny trakta. Toetran'ny Finoana roa. Nisy hira iray hafa natahotra sao havela hifanipaka ity tany ity.
Voa na ravina mpikambana?
Voa na ravina mpikambana. Ny fampiasana tsara kokoa ny fiandohana matevina kokoa amin'ny vatana tsara kokoa, ny diabe an-tery mahitsy! Rakotry ny lanezy izy:. Ny fampiasana findaiko mavesatra kokoa noho ny amin'ny hira manta. Tsy misy na inona na inona eto amin'izao tontolo izao mbola afaka mahavita jamba manana fampandrosoana masina. Ireo faritra manodidina dia tsy misy afa-tsy ireo singa manokana namboarina namboarina. Izany dia satria ny endrik'olombelona!
Tambajotra fifandraisana tsy miankina eo amin'ny COVID-19
Ahoana ny fiasan'ny 5G any ambanin'ny tany?
Fetin'ny Taom-baovao Sinoa 2020 (Fes Lohataona ...